‘के जमाना आ’ का निर्देशक पुडासैनीको कर्तुत यसरी भयो पर्दाफास - Purbeli News
‘के जमाना आ’ का निर्देशक पुडासैनीको कर्तुत यसरी भयो पर्दाफास
प्रकाशित मिति: शनिबार, पौष २३, २०७३ समय: १६:२८:०५
काठमाडौं । हास्यटेलिश्रृंखला ‘के जमाना आ’ का निर्देशक सिपी पुडासैनी धतुरेले पछिल्लो समय आफ्नो हैसियत देखाउँदै आएका छन् । उनले सिरियलमा देखिएका सबैसँग पैसा माग्दै आएका हुन् । पुडासैनी भद्रगोलमा समेत काम गरिसकेका कलाकार हुन् । भद्रगोल टिममा पनि आफ्नो हैसियत देखाएपछि भद्रगोलबाट उनी पन्छिएका थिए । भद्रगोलबाट पन्छिएपछि पुडासैनीले आफैँ सिरियल ल्याउन लागि परे । ल्याए पनि । तर, अहिले उनको सिरियलले जति फड्को मानुपर्ने थियो त्यति मार्न सकेको छैन् ।
यस्तो हुनुको पछाडी पुडासैनी आफैँले गर्दा हो । सिरियल आफ्नै जस्तो सोच्ने र सिरियलमा खेलेका सबै मान्छेसँग पैसा माग्दै हिँड्ने गरेको कारण माथि आउन नसकेको सिरियलमा काम गरिसकेका प्रवेश दाहाल बताउँछन् । उनले छोटो समयमै दर्जनभन्दा बढी कलाकार राख्दै निकाल्ने गरेका छन् । सिरियलमा काम गरेका व्यक्तिहरुसँग खेल्ने हो भने पैसा हाल भन्ने गरेको पाइएको छ । पुडासैनीले सिरियलमा काम गरेकाहरुसँग पैसा असुल गर्ने र नदिए सिरियलबाटै हटाइदिने गरेको सिरियलका व्यवस्थापक तथा ‘साइको टक्क’ थेगो प्रयोग गर्ने विकासराज पाण्डे बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘सिरियलमा एक भागको पैसा हाल, होइन भने निस्कि भन्दै २ चोटीसम्म मलाई राख्ने हटाउने गरे ।’ त्यस्तै सिरियलमा प्रहरी बनेर खेलेका प्रवेश दाहालसँग पनि पुडासैनीले पाँच लाख हालदिन आग्रह गरेका थिए । तर, उनले पैसा नदिएपछि उनलाई पनि दुई पटकसम्म राख्ने हटाउने काम गरे । सिरियल आएको महिना दिनमै यस्तै विवादका कारण केही हप्ता सिरियल बन्द भएको थियो । पछि विभिन्न व्यक्तिहरुलाई बोलाएर पुडासैनीले सिरियल प्रसारणमा ल्याएका थिए ।
पुडासैनीलाई यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले पत्रकार सुजन पन्तलाई तँलाई काठमाडौं बस्न मन छ कि छैन् भनेर उल्टै धम्क्याएका छन् । विभिन्न व्यक्तिहरुको नाम जोड्दै उनले तँलाई चाँहे भने जे पनि गर्नसक्छु भन्दै धम्की दिएका हुन् ।
‘म पनि पहिला लफडा गर्दै हिँड्ने मान्छे हुँ । चिनेको छस् । अरु मान्छे नलगाई एक्लै भेटेको ठाउँमा जे पनि हुनसक्छ’ उनी भन्छन् ।
तर, पनि उनको त्यो टिमभित्र अझैै विवाद कायम नै रहेको पाइएको छ । पुडासैनीको यस्तो हर्कतले सिरियल कति समयसम्म टिक्ला ? यस्तो गर्नु कतिसम्म उचित कार्य हो ? न्युज २४ को सहयोगमा